Mijanona tsy mampiseho ny atin'ny hafatra i WhatsApp taorian'ny fanavaozana ny iPhone mankany amin'ny iOS 11.4 | Vaovao momba ny gadget
Ignacio Sala | | Finday, Tutorials, WhatsApp
Ny fandefasana ny talata lasa teo an'ny iOS 11.4 amin'ny kinova farany, dia midika ho faran'ny sasany amin'ireo olana mahasosotra indrindra izay nifanenenanay saika isan'andro tao amin'ny iPhone niaraka tamin'ny kinova taloha, toy ny ny teboka mainty, ny sary famantarana ny rindranasa apetraka apetrakao amin'ny fotoana fialam-bolyo eo amin'ny solaitrabe na ny korontana ankapobeny amin'ny resaka amin'ny fampiharana Messages.
Saingy, misy ny miala ary misy ny hafa tonga. Amin'ity fotoana ity dia miresaka momba ny WhatsApp izahay, ny mpanjakavavin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eran'izao tontolo izao ary ny fitaovana fototra ho an'ireo mpampiasa an-tapitrisany rehefa miresaka. Aorian'ny fanavaozana ny iOS 11.4, maro ireo mpampiasa mahita ny fomba anaovany izany Miseho poakaty tanteraka ny fampandrenesana WhatsApp, raha tsy aseho ny mpandefa na ny atiny, na indraindray ny mpandefa ihany.
Raha ny fahitana azy, ity fanavaozana ity na ny kinovan'ny fampiharana WhatsApp (mbola tsy fantatra hoe iza no tompon'antoka) misy fiantraikany amin'ny fampandrenesana fanosehana, ireo izay mamela antsika handray fampandrenesana amin'ny fotoana rehetra, na avy amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra, mpanjifa mailaka, lalao na fampiharana iray. Mba hamahana io olana io dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toe-javatra WhatsApp izahay.
Ao amin'ny Fikirana WhatsApp, kitiho ny Notification. Manaraka izany dia tsy maintsy ampiasaintsika ny switch Preview. Ity safidy ity dia ahafahantsika mahita ny lahatsoratra tafiditra ao amin'ireo fampandrenesana. Raha efa navadika io safidy io dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fikirakiran'ny iOS isika.
Ao amin'ny Fikirana iOS, kitiho ny Notification, hita ao amin'ny sakana faharoa amin'ny safidy. Manaraka izany, mitady ny fampiharana WhatsApp izahay ary tsindrio. Manaraka izany dia mandeha amin'ny safidy farany misy izahay antsoina hoe Asehoy ireo topy maso ary safidio foana.
Na amin'ny lafiny iray na amin'ny hafa, amin'ny alàlan'ny WhatsApp na amin'ny alàlan'ny fikirakirana iOS, dia ho afaka hamaha ity olana ity isika izay sendra avy am-pelatanan'ny fanavaozana ny iOS farany, saingy tsy midika izany fa eo ny olana, afaka izy io ho WhatsApp koa, fampiharana indraindray ny fandidiana dia mamela be faniriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Mijanona tsy mampiseho ny atin'ny hafatra i WhatsApp taorian'ny fanavaozana ny iPhone mankany amin'ny iOS 11.4
Ireo headphones ireo dia hahafaly ny sofintsika
HomePod dia ho tonga any Frantsa sy Alemana amin'ny 18 Jona